Waa maxay faa'iidooyinka tirka files nuqul?
Marka aad soo bixi file badan oo internet ka, inta badan downloads ku yimaadaan la file labalaabka. Laga yaabaa in aadan ogayn ilaa your computer ka bilowdey si tartiib ah u socda. Files labalaabka waa junk Diintooda oo iyaga kaliya waa qashinka ah ee aad meel disk adag. Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah oo la tirtiro files labalaabka ka your computer. Waxaa ka mid ah
i. Si aad u soo kabsado meel disk adag gaboobeen,
ii. Si loo yareeyo baahida loo qabo in si joogto ah u kaydinta kale warbaahinta u gurmad
iii. Si loo yareeyo wakhtiga gaboobeen, halka raadinaya files
iv. Si aad u baabi'iyo baahida loo qabo Faydi file nuqul
v. In la kordhiyo xawaaraha aad computer
Lahaanshaha files nuqul goobta kala duwan ee computer waa yaac ah oo buuxda. Ma aqaan in aad taas version si ay u isticmaalaan marka ay tahay oo dhan tus. Mar kasta oo aad wax ka beddelo mid ka mid file meel gaar ah, oo dhan files nuqul yihiin modified waqti isku mid ah. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay in ay sii file hal iyo cadda inta kale si joogto ah.
Aqoonsiga files labalaabka kuwa asalka ah iyo iyaga gacanta tirka ku dhow dhow si ay wax aan macquul aheyn. Nasiib wanaag, waxa jira qalab wax ku ool ah oo loo isticmaali karo in la helo iyo tirtirto, kuwaas oo files nuqul ka your computer.
Top 5 qalab si aad u ogaato iyo tirto faylasha nuqul on Windows
Anti-Twin waa freeware ah oo ka raadin kartaa files nuqul oo iyaga tirtirto. Waxaa filter gaar ah file ka horjoogsanayay kordhin jecel iyo tirada files. Habkaani waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad ka raadin files isku mid la kordhin kala duwan iyo boqolkiiba kulan faylasha aad rabto in lagu daro ah. The files nuqul ka helay mid ka mid waa la tirtiri karaa si toos ah ama u dhaqaaqay Recycle Bin.
4. Fast Finder File nuqul
Fast Finder File nuqul ka mid ah interfaces user ugu wanaagsan ee raadiyayaal iyo removers nuqul. Waxay leedahay deegaanka Falanqeynta u arkaysid files qoraalka iyo ciyaaro Cajalado ka hor la tirtiro ah. Intaa waxaa dheer, qalab kuu ogolaanaya in aad ka raadin by la mid ah waxay ku xiran tahay heerka uu aad doorato. Qalabkani waxa uu sidoo kale leeyahay eegis gudaha ah oo taageera videos, Cajalado, files binary, qoraalka iyo sawirada.
CloneSpy uu leeyahay interface fudud oo la is barbar dhigay laba nooc files badan isticmaalka Pool 1 iyo 2. Pool codsiga waxa uu leeyahay afar hababka u raadinaya files la mid ah content, magac la mid ah, oo magiciisa la mid ah oo file oo la mid ah content iyo magaca. Waxay leedahay xarumood oo kala duwan in la badbaadin karaa sida default marka laga bilaabo barnaamijka. Qalabkani waxa uu u xiiso badan waxa loo isticmaalaa goobidda iyo takhalusid tus ka si degdeg ah oo aan u baahan dejinta fursado badan.
AllDup waa qalab lagu helo oo ay ka saareen files nuqul ka computer ah. Waxaa qoreysa geynta oo degdeg ah oo raadinaya in uu ogaado noocyada file labalaabka ay ka mid yihiin muusiga, filimada, sawiro iyo qoraalba. Waxa aad bixisaa fursado kale oo ay ku heli tus adigoo isticmaalaya baaxadda file, content file, magaca file, taariikhda la soo dhaafay modified, file ballaadhinta iyo sifooyinka file.
1.Auslogics nuqul File Finder
Qalab codsiga waxa uu leeyahay interface casri ah taasina waa u fududahay in ay isticmaalaan oo ay dhammaan dadka isticmaala. Waxa uu baaritaanku si dhakhso ah goobo cayiman ee kombiyuutarka. Qalabkani waxa uu baadhaa oo kaliya files tarin by magaca, taariikhda ama size. Habka iskaanka wuxuu noqon karaa yara ama la baajiyay waqti kasta. Waxaad tirtiri kartaa natiijada si joogto ah ama aad u sii karto in xarunta samatabbixin haddii u baahan tahay dib iyaga ugu helo taariikh dambe soo baxdo. Qalabkani waxa uu taageeraa raadinta meel folder kala duwan halkii folder hal.
Top 3 qalab si aad u ogaato iyo tirto faylasha nuqul on Mac
Easy nuqul Finder waa aalad awood u helida iyo takhalusaya music nuqul, videos, waraaqaha iyo sawiro. Waxay leedahay saaxir ah iyo ku xigeenka taas oo ka dhigaysa maamulka file nuqul fudud. Codsiga waxa kale oo uu leeyahay tirtireyso button kaas oo u ogolaanaya u soo kabashada xaaladaha degdegga ah iyo baaritaan degdeg ah.
Chipmunk waa agabka ugu wanaagsan ee codsiga loo isticmaalo in lagu nadiifiyo Mac oo la tirtiro dhammaan faylasha nuqul. Codsigan uma ahan oo kaliya files leh magacyo isku mid ah iyo taariikhda abuurka laakiin sidoo kale content la mid ah. Waxaa intaa dheer, qalab uu leeyahay muuqaalada Falanqeynta kuu oggolaadaan in aad ku eegaan files labalaabka iyo baaritaano degdeg ah. Natiijada scan ayaa ku tusi doonaa waxaad kaas oo tus ka haystaan ​​meel badan oo sidaas daraaddeed waxaad tirtiri kartaa ama iyaga ku hay gal ammaan ah.
Qiimeynta: 4.0 Stars
Gemini dushiisa finder ee file nuqul u Mac. Qalabkani waxa uu u baahan yahay ku daro ama wax ku jiididda iyo hoos u files nuqul in ay interface. Waxaa tirtirtaa tus ka files iyagoo eegaya magacooda file, content file, taariikhda abuurka iyo wax ka beddelid iyo meesha file. Waxa uu leeyahay user saaxiibtinimo interface taas oo si sahlan loo isticmaali, fahmaan oo soomi tirka tus.
Qiimeynta: 4.5 Stars
Waxyaabaha aan u baahan in ay is ogow of markii la tirtiro files nuqul
a. Ha tirtirto tus ka faylasha nidaamka halkii ay tirtirto faylasha shakhsiyeed oo ay ku jiraan sawiro, dokumentiyo, music, videos, iyo emails.
b. Codsiga waxaad kala soo bixi waa in la sameeyo hawlaha ay aasaasiga ah iyada oo aan dhibaato la habka. Waxaa freeware badan oo wax ku ool ah ka shaqeeya.
c. Guudmar files ka hor la tirtiro si looga fogaado in laga takhaluso faylasha dheeraad ah oo muhiim ah.
> Resource > masixi > Siyaabaha tirto faylasha labalaabka on Windows iyo Mac